a - TECHNOMANIAC's - BLOG: 2007
New Year Refurb Watch - Singapore Apple Store
နှစ်ကူးမှာ အိုင်ပေါ့အသစ် ကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်ချင်သူများ Refurbished Apple Products တွေကို မမေ့ပါနှင့်။ Singapore Apple Store က အခု Refurbished item တွေ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရက်က မောင်သန့်ဇင်ကတော့ အိုင်ပေါ့ ပထမမျိုးဆက် 2GB ကို SGD 88 နှင့် ၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ တော်တော်များများကုန်သွားခဲ့ပြီး ဘာမှ ထပ်ဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ Apple Store က ထပ်ပြီး stocks တွေကို replenish လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခု ရောင်းနေတဲ့ Refurbished Products တွေကတော့
- iPod Video 5.5 Generation 30GB @ SGD 288
- iPod Nano Previous (2nd) Generation 4GB Silver/Green @ SGD 158
- iPod Nano 1st Generation 2GB White/Black @ SGD 88
- iPod Nano 1st Generation 1GB White/Black @ SGD 68
- iPod w/Color Display 60GB @ SGD 218
- iPod w/Color Display 30GB @ SGD 179
- iPod w/o-Color Display U2 Edition 20GB @ SGD 118
- iPod Shuffle (current design) 1GB Orange/Pink/Silver @ SGD 79
- Macbook Pro 17inch, 2.4GHZ Intel Core2Duo, 2GB RAM, 160GB Hdd, Nvidia 8600M GT with 256MB GDDR3 ... @ SGD 3838 (cheap!)
- Macbook 13inch, 2.16GHz Intel Core2Duo (White), 1GB RAM, 120GB Hdd, GMA 950 ... @ SGD 1568 (real cheap!)
ဒါကတော့ ဒီစာရေးတဲ့အချိန်ထိ လိပ်တက်ဈေးနှုန်းတွေပါ။ Stocks ကျန်မကျန်တော့ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ Free shipping ပါ။ နေ့ချင်းရပါတယ်။
Refurbished ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့လူတွေကို နည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ... အဲ့ဒါတွေဟာ စက်ရုံကိုပြန်ပြီး အပ်ခံရတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းပစ္စည်းတွေ ပြဿနာဖြစ်လို့သာ ပြန်လာတာများပြီး အကုန်သန့်ရှင်းပြီးသားပါ။ လုံးဝအသစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်ကြည့်ခိုင်းရင်တောင် မခွဲနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Warranty ကလည်း ပစ္စည်းအသစ်တွေနှင့် အတူတူပါပဲ။ ဈေးလည်း သက်သာတယ်ဆိုတော့ ၀ယ်မဲ့စိတ်ကူးရှိရင်၊ မော်ဒယ်နည်းနည်းဟောင်းတာတွေကို လက်ခံနိုင်ရင် Refurbished items တွေကို ၀ယ်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပါရစေ။
Merry New Year peeps, with new gadgets!
Posted by Wai Phyo at1:52 PM0comments
Bye 2007 + Products and Services I like
New Year မတိုင်ခင် ပို့စ်တစ်ခုတော့ တင်သင့်တယ် ထင်လို့တင်လိုက်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဟာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသစ်အဆန်းတွေ ထွက်ခဲ့ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အခုဆို ဘလော့ခ်ဆိုက်ကြီး တော်တော်များများမှာလည်း ၂၀၀၇ အတွက် သူတို့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ၀ဗ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲတွေကို ရွေးချယ်ကောက်နှုတ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ၂၀၀၇ခုနှစ်ရဲ့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး အသုံးဖြစ်ဆုံး အအောင်မြင်ဆုံး Products and Services တွေကို အခုလို ရွေးချယ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
- အွန်လိုင်းအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ အကောင်းဆုံး Browser ကစရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မပြောလဲ Firefox ဆိုတာသိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ ယိုယွင်းလာတဲ့ သူ့ရဲ့ Build တွေဟာ ကောင်းတဲ့အချက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Safari, Opera တို့က အတော်လေးပြန်ပြီး နေရာယူလာပါတယ်။
- Email & Clients တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် Gmail + Thunderbird ကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ Mac အတွက်တော့ Leopard Mail ကို ကျွန်တော် ကရွေးပါမယ်။
- Operating System က Leopard ပါ။
- Office Application Suite ကို MS Office 2007 ကို ရွေးပါမယ်။ ပန်းသီးရဲ့ Pages, Keynote တွေက ကောင်းပေမယ့် Numbers တွေက ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
- Online office suite မှာ Zoho ကို ရွေးလိုက်ပြီး၊ Word Processing သီးသန့်ဆိုရင် Buzzword ပါပဲ။
- Instant Messaging က Gtalk ဖြစ်ပြီး၊ အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ messaging service ကတော့ Twitter ပါ။ သူ့နောက်က Tumblr လိုက်ပါတယ်။
- Notes တွေမှတ်တဲ့နေရာမှာ JJot နှင့် Springnote ကို အကြိုက်ဆုံးပါ။
- မျက်စိ အနောက်ဆုံး Social Networking က Facebook ပါ။ စိတ်ဝင်စားဆုံးက LinkedIn ဖြစ်ပြီး။ Yahoo! Kickstart က ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ MySpace က ငြိမ်နေပြီး Virtual World တွေရဲ့ effect ကတော်တော်ကြီးလာပါတယ်။ SecondLife ကို ဥပမာကြည့်ပါ။
- Advertising network မှာ Adsense က ဆက်လက်ကောင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး Adpinion, Ads-click, Adverlets, Bidvertiser, AdBrite, Nuffnang စတဲ့ personal level network တွေကိုလည်း သဘောကျမိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နောက်တစ်ခုက Fluc ဖြစ်ပြီး ဘယ်လောက်အောင်မြင်နိုင်မလဲ စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
- သီချင်း ကို အွန်လိုင်းမှာ နားထောင်အဖြစ်ဆုံးနေရာက Skreemr ပါ။ Last.fm, Deezer, Pandora, Napster တို့ကတော့ ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။
- ၂၀၀၇ ခုနစ်ဟာ Internet TV, Video တွေ အရမ်းအားကောင်းခဲ့တဲ့နှစ်ပါ။ Server to client streaming, user generated content တွေထဲမှာ YouTube ကိုပဲ ရွေးပါတယ်။ P2P Demand မှာ Joost ကို ရွေးပါတယ်။ Livestation, Babelgum, Zatto, VeohTV တို့ကို ဒုတိယ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ P2P Live မှာတော့ Sopcast ကိုပဲ အကောင်းဆုံးလို့ထင်နေပါသေးတယ်။ အသုံးဝင်လို့ပါ။
- Podcasts တွေကို iTunes Podcast Directory က အကောင်းဆုံးဖြန့်ချီပေးနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
- Mash ups ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဆိုရင် Yahoo Pipes က အောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ MS ရဲ့ Popfly လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Google Mashups တွေလည်း သုံးကြပါတယ်။
- Online storage ကိုတော့ Mediafire ကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ Pipebytes က အလားအလာကောင်းပြီး၊ ဒီမားကတ်က အတော်ကျယ်ပြန့်နေပါသေးတယ်။
- အကောင်းဆုံး Gadget က iPhone ပါ။
- အကြိုက်ဆုံး လက်ပတော့က MacbookPro နှင့် Sony Vaio series ပါ။
- အညံ့ဆုံး gadget က Palm ရဲ့ Mobile Computer လေးပါ။ အမေဇုန်ရဲ့ Kindle လည်း တယ်ဖျင်းပါတယ်။
- တိုးတက်မှု အကောင်းဆုံး gadget က Zune ပါ။ Flashbased MP3 Market ကို တော်တော် လုယူလိုက်ပါတယ်။
- အကောင်းဆုံး Search engine က Google ပဲ ဖြစ်နေသေးပြီး။ Hakia, Peekyou တို့ကို ရံဖန်ရံခါသုံးပါတယ်။
- Goonernews မှာ Arsenal Blog တွေကို နေ့စဉ်ဖတ်ပြီး။ Originalsignal မှာ နည်းပညာသတင်းတွေဖတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ သတင်းတွေကိုနားထောင်ရာမှာ BBCWorld ကို အကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ရွေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဘလော့ခ်တွေထဲမှာတော့ မောင်သန့်ဇင်ရဲ့ ဘလော့်ခ်ကအကောင်းဆုံးပါ။ =P
- API တွေထဲမှာ အဟော့ဆုံးဖြစ်သွားတာက Android နှင့် Open Social ပါ။ iPhone SDK ကနောက်လမှာလာပါမယ်။ Developer tools တွေထဲမှာ Eclipse ကို၊ VS 2008 (orcas) နှင့်အတူ ပူးတွဲအကောင်းဆုံးပေးလိုက်ပါတယ်။
- ပရဟိတပရောဂျက်တွေထဲမှာ Wikipedia နှင့် Kiva ကို ရွေးပါတယ်။
- အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းက PES 2008 ပါ။
- ၀င်းဒိုးအတွက် အထွေထွေTool တွေ အနေနဲ့ Avast Antivirus, Spyware Terminator, Comodo Firewall, JKDefrag, CCleaner, Screenshot Captor, JustColorPicker, Notepad++, Paint.NET, Adobe Reader (not foxit :P), WinRar (not 7-Zip :P), Launchy, Picasa, Xecutor တို့ကို သုံးဖြစ်ပါတယ်။
- မက်ခ်အတွက်တော့ သူ့ရဲ့ ပါပြီးသား ဆော့်ဖ်ဝဲတွေက တော်တော်လေးလုံလောက်နေပေမယ့် ကျွန်တော် ကြိုက်မိတာကတော့ Twitterfic, iCyclone, VMWare, Toast!, MainMenu, Adium, Transmit, Superduper, iDefrag, Miro တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါအကုန်ပဲထင်ပါတယ်။ ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် အောက် Comments မှာ ထပ်ထည့်ပေးပါ။ ထပ်မံရှယ်တော့ အားလုံးဗဟုသုတရပါတယ် ။ =D
( ကျွန်တော် ရွေးတာတွေ သိပ်များသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ လင့်ခ်တွေကို နောက်တော့မှ ထပ်ထည့်ပါမယ်။ ခုတော့ အချိန်ရသလောက် အမြန်တင်လိုက်ခြင်းပါ။ )
Posted by Wai Phyo at7:24 PM0comments
Christmas - Buy your Gifts!
ခရစ်မတ်စ်ကာလမှာ ကျွန်တော် ခေါင်းတကုတ်ကုတ်နှင့် အလုပ်တွေရှုပ်နေရပါတယ်။ ဘလော့ခ်ကို Pause လုပ်ထားလိုက်ရပြီး ခုမှ ကျန်နေသေးတဲ့ ပို့စ်တွေ တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ =D
လက်ဆောင်တွေ မ၀ယ်ပေးရတဲ့လူများ သင်တို့၏ ချစ်သောသူများ၊ မိဘဆွေမျိုးများကို ၀ယ်ပေးဖို့မမေ့ပါနှင့်။ အင်္ဂလိပ် အထာမို့လို့ ကြည့်မရဘူးပဲပြောပြော၊ လူတိုင်းကတော့ လက်ဆောင်လေးရရင်ကျေနပ်တာပါပဲ။ လမ်းထိပ်က ကြက်ဆီထမင်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဘူးနှင့် ထုပ်ပြီးတော့ Merry Christmas တော့ မလုပ်နှင့်ပေါ့ဗျာ။ အနည်းဆုံး Raoul က ရှပ်အင်္ကျီ၊ Guess က ပိုက်ဆံအိတ်လေးလောက်တော့ ၀ယ်ပေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ပိုက်ဆံမရှိသော နည်းပညာသမားများကလည်း စိတ်ဓါတ်မကျပါနှင့်။ ၀င်းဒိုးယူဆာတွေကို ဗိုင်းရပ်စ်နိုင်နည်း၊ သတ်နည်း၊ နပန်းလုံးနည်း၊ တနေ့ကို Format ဘယ်နှစ်ခါအများဆုံးရိုက်သင့်သလဲ၊ ဒီ Theme ကနေ ဟို Theme လေး ခဏခဏ ပြောင်းနည်း စတဲ့ကျမ်းလေးများ ၀ယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်းအားဖြင့်လည်း အိုင်ပေါ့တွေ ဈေးကြီးတယ်ထင်တဲ့လူတွေအတွက် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ရဲ့ အင်မတန်မှ လှပခန့်ညားထယ်ဝါ ၀င့်ဝါ ၀င့်ကြွားသော Zune လေးတွေရှိပါတယ်။ ၀ယ်သာဝယ်လိုက်ပါ၊ သူတို့မှာ မရောင်းရသေးလို့ အားငယ်နေတာ၊ အားပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မိုက်ခရိုဆော့ဖ် တစိတ်တပိုင်းပိုင်တဲ့ Facebook ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ တနေ့တနေ့ အဲ့ဒီမှာ အချိန်ဖြုန်းပေးပါ။ ခရစ်စ်မတ်မှာ အားအားယားယား Zombie ကိုက်တမ်း၊ HotFriends ရှာတမ်း လုပ်ကြပါ။ ပြီးရင် အဓိက ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့ Gift လေးတွေကိစ္စ၊ အဲ့ဒါတွေကို Facebook ပေါ်မှာတင် ၀ယ်ယူအားပေးပြီး လက်ဆောင်ပေးကြပါ။ အဲဒါမှမဟုတ် အိုင်ပေါ့တပ်ခ်ျတွေ၊ အဲ့လို ပွတ်ရဆွဲရ တပ်ခ်ျရတာတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Tablet PC တွေထွက်နေတာ နှစ်ချီနေပြီဆိုတာလည်း မမေ့ပါနှင့်။ ဘာလို့ အဲဒီသေးသေးမဲမဲလေးတွေဝယ်နေမတုံး။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် table pc ဆိုတာ အပြားကြီးက နည်းနည်းနောနောမဟုတ်၊ မျက်နှာပြင်ကြီးတော့ Stylus, လက်ညှိုး၊ လက်မ၊ နှာခေါင်း၊ ခြေမနှင့်ပါ စိတ်တိုင်းကျ ပွတ်သုံးလို့ရပါတယ်။ သုံးပါလေ့။
စီးပွားရေးသမားတွေ အတွက်လည်း အကြံတစ်ခုပေးချင်တာကတော့ Win Office 2007 အစစ်ကိုဝယ်ယူအားပေးပါလို့ ထပ်လောင်းပြောချင်တာပါပဲ။ ခုဆို မက်ခ်မှာ 2008 တောင် ထွက်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနှင့်၊ အဲ့ဒါက ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တတ်တဲ့ဟာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး၊ အရမ်းအလှအပတွေများနေပြီး Animation တွေပါတော့ ခင်ဗျားတို့လို Hardcore တွေဘယ်ကြိုက်မတုံး၊ ဖြုန်းဒိုင်းဆိုလုပ်၊ Ctrl+Alt+Del ဟန်ပြင်နေတဲ့ ဆရာသမားတို့က အဲ့ဒီ နုနုရွရွလေး ပေါ်နေတဲ့ Office 2008 နှင့် ကိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တာတော့ သွားမ၀ယ်လေနှင့်။
နောက်မ၀ယ်သင့်တာ တစ်ခုက အိုင်ဖုန်းပဲဗျ။ စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေက အရူးမီးဝိုင်းသလိုဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း သတိပေးဖို့တာဝန်တော့ရှိလေသဗျ။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ Windows Mobile6ဆိုတာ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ၊ အဲ့ဒါတွေကို Smart Phone လို့ခေါ်သဗျ။ အိုင်ဖုန်းက Smart Phone မဟုတ်ဘူးလေ၊ နောက်ပြီး သုံးတဲ့လူတွေ ဘာမှတတ်စရာမလိုဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါဘယ်ကောင်းမလဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်ကိုပဲ ကြည့် WM သုံးပြီးကတည်းက ဖုန်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်လည်း သတ်တတ်သွားပြီ၊ စပိုင်ဝဲယ်လည်း ထုတ်တတ်သွားပြီ။ Registry တွေလည်း ပြင်တတ်သွားပြီ။ တစ်ရက်ကို Reboot ဘယ်နှစ်ခါချသင့်လဲ လည်း နားလည်သွားတယ်။ ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်ချင်တိုင်း ဒါတော်တော်ကြိုးစားရတယ်လို့ဆိုရမယ်။ ကောင်းတယ်မဟုတ်လား၊ Smart Phone ဆိုတာ သုံးတဲ့လူ Smart ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဗျ။ တခြားတစ်ဖက်ကိုကြည့်ရင် အိုင်ဖုန်းက ခပ်ပိန်းပိန်းလူတွေအတွက်ထုတ်တာပါဗျာ။ ကြည့်လေ။ အကုန်လုံးက တပ်ခ်ျတပ်ခ်ျနှင့် လွယ်နေတော့ ဘယ်လာပြီး ကိုယ်ကတိုးတက်တော့မလဲ။ Application တွေက လှတော့ သုံးချင်၊ အင်တာနက်ဖို့ ပေးရနှင့် သိပ်မကိုက်ဘူးဟတ်လား။ WM မှာဆိုရင် သူ့ရဲ့ Application တွေက သုံးရခက်တော့ ဘာမှမသုံးဖြစ်တော့ တပြားမှကို မကုန်ဘူး။ အဲ့ဒါတွေ စဉ်းစားကြပါ သူငယ်ချင်းတို့၊ သူများ ပွတ်တိုင်းကိုယ်လည်း မပွတ်ချင်နှင့်၊ Windows Mobile ကိုပဲ အားပေးကြပါ။
ဒါအကုန်ပဲထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမေ့အတွက် ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံးဝယ်ပေးဖို့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လည်း အပေါ်က ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန် လေးတွေကို မမေ့နှင့်ဦး။ အောက်မှာ ဒီအပတ်အတွက် မက်ခ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
- Divx Pro ကို အခု အလကား ပေးနေပါတယ်။ သွားယူကြပါ။
- ပန်းသီးရဲ့ ကာတွန်း ကြော်ငြာအသစ်က အရမ်းလှပါတယ်။ Stop-Motion Esque နည်းပညာပါ။ ထွက်တာကြာပေမဲ့ ဘယ်လောက်လှသလဲ မျက်မြင်ပါပဲ။
- Cupertino မှာ ကွန်ပျူတာသေးသေးလေးတွေ တွေ့နေပါပြီတဲ့။ နောက်လမှာ Notebook အသစ်တွေထွက်ပါတော့မယ်။ ငွေရောင်နှင့် ခဲရောင် မက်တဲလစ် တွေပါ။
- Office 2008 က ခွေတွေစပြီးကူးနေပါပြီတဲ့၊ နောက်လမှာပဲ စရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Quicktime 7.3.1 ထွက်လာပါတယ်။
- Freeverse ရဲ့ Hordes of Orcs အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုပါတယ်။ ကစားကြည့်ကြပါ။
- Flash H.264 ကို support ပေးလိုက်တာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ 3G အိုင်ဖုန်းတွေ ထွက်တော့မှာဖြစ်ပြီး၊ ပန်းသီးက နည်းပညာအသစ်တွေ စမ်းသပ်နေပါတယ်။ Battery (ပထ၀ီ) =P သက်တမ်းကြာရှည်ခံစေရန်ဆိုပါတယ်။
ဒီလောက်ပါပဲ ... ဒီနေ့တော့။
Posted by Wai Phyo at10:12 AM0comments
December Promotions for Mac Software
နိုဝင်ဘာလကုန် ThxGiving နေ့ကနေစပြီး ခရစ်စ်မတ်ကာလ ၁ခုလုံးဟာ ဈေးဝယ်လို့ကောင်းတဲ့ ကာလ၁ခုဖြစ်ပါတယ်။ မက်ခ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေလိုချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဈေးတွေမတရားချထားပြီး ၀ယ်လို့အရမ်းတန်ကြောင်း ကျွန်တော်က အာမခံပါရစေ။
Check out the following Whopping Promotions, guys! It's enticing.
Currently my favourite for this week :D - Its lucrative bundle apps are tempting. Don't miss it!
Feed your mac with good food. The more you buy, the more discount you will get!
Santa loves Mac. He's generous enough to give away 20% on many products, too!
These fantastic daily savings from MacZot will make your life on Mac more tasteful.
Oh, our fantastic promotion house will be coming soon, again. Don't forget to keep an eye on it!
(Some people thumbs up it's the best)
Enjoy the apps you love. Merry Christmas.
Posted by Wai Phyo at11:13 AM0comments
iPhone/Touch - Why Mod?
စင်္ကာပူမှာ လာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ထွက်မယ်လို့ပြောသံကြားတော့ သူငယ်ချင်းတွေက လာမေးကြတယ်။ Third-Party Apps တွေ ဘယ်မှာရမလဲတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မ၀ယ်နိုင်သေးလို့ ကိုယ်တိုင်တော့ မစမ်းရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တွေ့နေတဲ့ လင့်ခ်တစ်ချို့တော့ အောက်မှာရေးပေးလိုက်တယ်။ သတိထားပါ။ ဒါဟာ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမှန်ပေမယ့် မတော်တဆ ပျက်သွားရင် ပန်းသီးက ပြင်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်လည်း သိပ်တော့အားမပေးပါဘူး။ ပျော်ဖို့ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ Updates အသစ်တွေက ပိုပိုကောင်းလာနေပါပြီ။ စိတ်တိုင်းမကျသေးဘဲ ကလိချင်သေးတယ် ဆိုရင်တော့လည်း သဘောပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီမှာ တရားဝင်ထုတ်မယ့် SDK ကို စောင့်နေပါတယ်။
ဟောဒီလင့်ခ်မှာ ဟက်ခ်ဖို့ ဖိုင်တွေပေးထားပြီး၊ ဒီလင့်ခ်မှာတော့ အိုင်ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ဟောဒီမှာတော့ အိုင်ပေါ့တပ်ခ်ျနှင့် ပတ်သက်တာတွေရှိပြီး၊ ဒီမှာတော့ ၀ဗ်ဆော့ဖ်ဝဲလေးတွေ ၇၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ၀င်းဒိုး အသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်း ဟောဒီဖိုရမ်မှာ ဘယ်လို ဟက်ခ်ရလဲရှင်းပြထားပါတယ်။
Posted by Wai Phyo at1:57 PM0comments
မနေ့ကတော့ အမေရိကားနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နည်းနည်းရှုပ်ယှက်ခတ်သွားတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ ဆူဆူညံညံသိပ်မကြားမိပါဘူး။ Apple ရဲ့ Customer Royalty ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာ ဟောဒီ မက်ခ်ဝေါလ်လင့်ခ်မှာ သွားကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ လူတွေဝယ်နေလိုက်တာ hot cakes တွေကျနေတာပဲ။
အဲ့ဒါနှင့် ကျွန်တော်လည်း ၀ယ်ချင်နေတာ မနေနိုင်တာနှင့် ဒီနေ့ Funan ရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာလည်း တရစပ်ရောင်းနေရတာဗျာ။ စက်တွေအကုန်လုံးလည်း Leopard Installed တွေကြီးပဲ။ ဘာရမလဲ သွားစမ်းကြည့်တာပေါ့။
မြန်ချက်ကတော့ သူ့ဝဗ်ဆိုက်မှာ ကြော်ငြာထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Multi-Core Processor / 64bit ရှိတဲ့လူတွေဆိုပိုပြီးသိပါလိမ့်မယ်။ OS ရဲ့ အဓိက၀င်ရိုးကိုပါ ပြန်ပြင်ထားတဲ့ ဒီOSရဲ့ မြန်ချက်ကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ။ ကျွန်တော် Safari, Firefox ကောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ချက်ခြင်းတက်လာတယ်။ နောက်ပြီး iMovie, iWeb စတဲ့ ခပ်အကောင်ကြီးကြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေလည်း ချက်ခြင်းသုံးလို့ရတယ်။ မြန်ပါပေ့။
Coverflow ကလည်း လှပါ့ဗျာ။ မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်လေးတွေ၊ ဓါတ်ပုံလေးတွေ၊ သီချင်းတွေကို ချက်ခြင်း အတွင်းထဲထိလှိုက်မြင်ရတယ်။ နောက်သိပ်အားမရသေးဘူးဆိုရင် Space Bar တစ်ချက်နှိပ်လိုက် Quick Look ပေါ်လာမယ်။ Animation ကတော့ လုံးဝ အထစ်အငေါ့မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် Quick Look သုံးပြီး Undermyskin Album ထဲက သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင် စမ်းဖွင့်ခဲ့သေးတယ်။ ရှယ်ပဲ။
Expose ( မက်ခ်သမားတွေတော့ သိမှာပါ။ ) လို့ခေါ်တဲ့ ၀င်းဒိုးတွေ ဖွင့်ထားတဲ့ Application တွေ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့အကုန်ရောက်လာအောင်လုပ်တဲ့ Function ကိုလည်း စမ်းခဲ့သေးတယ်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနှင့် ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ Spaces ၄ခုလုံးပေါ်လာပြီး ရှိသမျှဝင်းဒိုးတွေ မြင်ရတယ်။ Space ၁ခုကနေ ၁ခုကို Application တွေ ရွှေ့တာလဲ ဘာမှ အထစ်အငေါ့မရှိခဲ့ပါဘူး။ Movies တွေလည်း အေးဆေးရွှေ့လို့ရတယ်။
နောက် Dock အသစ်နှင့် Stacks တွေကိုလည်း စမ်းခဲ့ပါတယ်။ နည်းနည်းမသုံးဖူးတော့ အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပေမဲ့ တော်တော်လှတဲ့ ပစ္စည်း၁ခုပါပဲ။ Menubar, Dock တွေက ဖောက်မြင်နေရတဲ့ Transparent ဖြစ်သွားတာ၁ခုပဲဗျာ။ Vista ကိုကြည့်လိုက်ရသလိုပဲ၊ အဲ့ဒီအပိုင်းလေးက။ နည်းနည်းတော့ဘ၀င်မကျဘူး။
အဲ့နောက်ဆုံးမေ့တော့မလို့ Spotlight ကိုလည်း စမ်းခဲ့သေးသပ။ Quicksilver သုံးနေကျဆိုတော့ မြန်ပါ့မလားလို့စဉ်းစားနေတာ ဒီ Spotlight အသစ်က ပိုတောင်မြန်တယ်လို့ခံစားမိပါတယ်။ စာလုံး၁လုံးရိုက်လိုက်တာ Dicitionary ပေါ်လာပြီး ဘာအဓိပ္ဗါယ်လဲဆိုတာ ချက်ခြင်းပြပေးတယ်။ နောက် System နှင့်ပတ်သက်တဲ့ တခြားဟာလေးတွေ ကလိမလို့ပဲ နည်းနည်းပဲကြည့်ခဲ့ရတယ်။ ၀ယ်မဲ့လူတွေပြုံဝင်လာလို့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းကို ဈေးမေး ဘာညာပြုပြီး ပြန်ပြေးထွက်လာရတယ်။ ကျွန်တော့် ဘေးမှာတော့ အနောက်တိုင်းသား သုံးလေးယောက်က ခွေဘူးလေးတွေ တကိုင်ကိုင်နှင့် ကျေနပ်နေကြတယ်။
၂၃ဂ စလုံးဟာ ကျောင်းသားတွေ အတွက်တော့ များတယ်လို့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗစ်စ်တာကို ဘူးပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တကားကားနှင့် တက္ကစီပေါ်မှာတောင် ကြော်ငြာထားတာတောင်မှ၊ ဈေးကြီးလို့ မ၀ယ်တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ကြွားတာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့ အလကားရထားတဲ့ vista busines က စလုံးမှာ ဈေးတော်တော်ပေါက်ပါတယ်တဲ့။ စဉ်းစားလို့ကိုမရပါဘူးဗျာ။ Ultimate ဆိုရင် ပိုတောင်ဈေးကြီးသေးတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဂိမ်းကစားတာကလွဲပြီး ဘာမှမသုံးဖြစ်ပါဘူး။
ထားပါတော့၊ ရန်ပွဲတွေစဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါနှင့် ကျွန်တော့်ဆီမှာ Vista Basic Edition ၁ခု၊ Vista Ultimate Edition ၁ခု ရောင်းရန်ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ အီးမေးလ်ပို့ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တွေ့တယ်မဟုတ်လား ကျွန်တော် ဗစ်စ်တာ ဘယ်လောက် ချစ်သလဲဆိုတာ၊ packing လိုက် သိမ်းထားတယ်၊ ရောင်းစားဖို့ ၊ ကွိကွိ။
အဲ့ ကျွန်တော်တို့ Leopard သွင်းမဲ့လူများ ဟောဒီလင့်ခ်တွေကို သွားကြည့်ဖို့လည်းမမေ့ပါနှင့်။ Backup တွေဘာတွေ လုပ်ဖို့ ပြသပေးထားတဲ့ နေရာတွေပါ။ Link 1, Link 2.
Happy 10.5 days.
Posted by Wai Phyo at5:40 PM0comments
Posted by Wai Phyo at5:52 PM0comments
- Wikipedia ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်လောက်ကတည်းကစနေတဲ့ အလှုငွေကောက်ခံပွဲကို မထည့်သေးရသူ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ထည့်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ မသိသေးတဲ့အရာမှန်သမျှ သိအောင်ကူညီပေးနေတဲ့ အင်တာနက်ရဲ့အကြီးမားဆုံး Knowledge Exchange ကြီးကို Support ပေးလိုက်ပါဦး။ Giveahand to Wiki!
- ဒီစာရေးတဲ့အချိန်ရဲ့ နောက် ၁ရက်နှင့် ၁နာရီခွဲမှာ Leopard ထွက်ပါမယ်။
- Bootcamp User များ သတိထားပြီး စောင့်နေပါ။ Leopard ထွက်တာနှင့် Beta ပိတ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
- Pro Evolution Soccer 2008 Europe မှာ မနက်ဖြန်ထွက်ပါမယ်။ ကစားဖို့အားခဲထားပါ။
- MediaRingTalk က သူ့ရဲ့ ၈နိုင်ငံ Free Service လာမယ့် ၃၁ရက်နေ့ဆို ပြီးပါပြီတဲ့။ များများပြောထားပါ။ နောက်ပြီး အသစ်ထွက်တဲ့ UI ကိုလည်း ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး စမ်းဖို့မမေ့ပါနှင့်ဦး။
- IMAP က မရတဲ့လူမရသေးပါဘူးတဲ့ ၊ Google ကို ၀ိုင်းအော်ကြပေရော့။
Posted by Wai Phyo at4:27 PM0comments
- Apple(AAPL) ဟာ သူ့ရဲ့ မားကတ်ရှယ်၁ခု ၁၈၅ဒေါ်လာ ကျော်ကျော်ထိ တက်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး၊ အကြွယ်ဝဆုံး ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူအဖြစ် နေရာယူလိုက်ပါပြီ။ မားကတ်တန်ဖိုး ၁၆၁ဘီလီယံကျော်ရှိပြီး၊ အိုင်ဘီအမ်ကတော့ ၁၅၃ ဘီလီယမ်ပဲရှိပါတော့တယ်။ အိပ်ခ်ျပီက ၁၃၃ဘီလီယမ်နှင့် နောက်ကလိုက်နေပြီး၊ နာမည်ကြီး ဒဲလ် ကတော့ ၆၅ ဘီလီယမ်ပဲရှိလို့ နာမည်ကြီးတွေထဲမှာ နောက်ဆုံးကနေပါတယ်။
- ကားမောင်းဂိမ်းတွေထဲမှာ နာမည်ကောင်းရထားတဲ့ Collin McRae Rally ဟာ မက်ခ်အတွက် သူ့ရဲ့ဂိမ်းကို ၂၆ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပါမယ်တဲ့။ OSX 10.5 နှင့်အပြိုင်မို့ လူတွေက အဲ့ဂိမ်းနာမည် သိပ်မပေါက်မှာ စိုးရိမ်နေလေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကစားရတာပေါ့ဗျာ။ EA ကလို အူကြောင်ကြောင် ခပ်ချာချာဂိမ်းတွေနှင့်စာရင်.. ။
- Mac OS X 10.5 Leopard ဟာ ၂၆ရက်နေ့မှ တရားဝင်ထွက်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် Apple က တစ်ချို့ Preorder လုပ်ထားတဲ့ Customer တွေကို အရင်ပို့လိုက်ပါပြီ။ ဟောဒီ လင့်ခ်တွေမှာ သွားကြည့်ပါ။ Link1, Link2, Link3.
- Google Desktop က သူ့ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲကို Leopard မှာ သုံးလို့ရအောင်ပြင်ပြီးထုတ်လိုက်ပြီဆိုပါတယ်။ IMAP ကျွန်တော်စမ်းမသုံးရသေးဘူး၊ ဘယ်လိုနေလဲတော့မသိဘူးဗျာ။
- လန်ဒန်ကလူတွေကတော့ ၂၅ရက်ကနေ၊ ၂၇ရက်ထိလုပ်မဲ့ Expo မှာ အလုပ်ရှုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ Leopard ဖွင့်ပွဲရှိပါတယ်တဲ့။
- အိုင်ဖုန်းကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိုဂရမ်မာများအတွက် အိုင်ဖုန်း Dev centre ဆိုပြီး အသစ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သွားပြီး ကလိလို့ရပါပြီ။
Leopard နှင့် ပတ်သက်တဲ့ Preview တွေ တပုံတပင် ထွက်လာခဲ့ပြီး နောက်ပို့စ်မှာ အဲ့ဒီအကြောင်းတင်ပါမယ်။ =D မဖတ်ချင်တဲ့လူများ ဒီရက်အတွင်းမှာ RSS Feed ကို ပိတ်လိုက်ပါ။ =P
Posted by Wai Phyo at1:47 PM0comments
မနေ့က ပန်းသီးကုမ္ပဏီက သူ့ရဲ့ ကြွယ်ဝမှုကို ထုတ်ပြပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၂၉ ကတည်းက ပြီးသွားတဲ့ Fiscal year's Fourth Quarter မှာ သူဘယ်လောက်မြတ်လဲ ကြေညာပါတယ်။ ၀င်ငွေ ၆.၂၂ ဘီလီယမ်ရှိပြီး အသားတင်မြတ်ငွေ သန်း ၉၀၄ သန်းရှိပါတယ်တဲ့။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တုံးက သန်း ၅၀၀ ကျော်သာ မြတ်တာနှင့် ယှဉ်ရင်တော်တော်လေး ရလိုက်ပါတယ်။
တစ်နှစ်လုံး အတိုင်းအတာအရ ၂၄ ဘီလီယမ်ဝင်ပြီး ၃.၅ ဘီလီယမ်မြတ်လိုက်တဲ့ စတီးဂျော့ဗ်ဟာ မျက်နှာကြီးကိုဖြီးနေတာပါပဲ။ ကိန်းဂဏန်းတွေ မျက်စိနောက်စရာကောင်းသလို ဓါးပြ၀င်တိုက်ချင်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။
၂၀၀၈ မှာ အိုင်ဖုန်းကို ၁၀သန်းရအောင်ရောင်းပါ့မယ့်အကြောင်းလည်း ထပ်ပြောသွားပြီး နောက်နှစ်မှာထွက်မဲ့ OS X 10.6 ... ဘာညာတွေလည်း အမှီရအောင်ထုတ်ပါမယ့်အကြောင်းပြောပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် ၁နှစ် ၁ခါ OS အသစ်ထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ redmond က အကိုကြီးတွေကတော့ Windows7ဟာ လာမယ့် ၂၀၁၀ မှာတောင် မသေချာပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။
မြန်မြန်နှင့် မှန်မှန်ပြင်တဲ့ Relentless Driving Efficiency စနစ်ကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က သိပ်အသုံးမချပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုယိုတာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အချက်မှာလည်း အဲ့ဒါပါပါတယ်။ မူလီ၁လုံး ၂လုံးက အစ ကားရဲ့စွမ်းရည်ကျမယ်ထင်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အကန့်အသတ်၁ခုကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ပစ္စည်း၁ခုနှင့် အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ Shorter Turnaround Time ဟာ Better Efficiency ကို ပိုပြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ Operations သင်ဖူးတဲ့ အကိုတွေအမတွေ သိမှာပါ။ ဘာပဲပြောပြောဗျာ နောက်ဆုံးနောက်နှစ်ထွက်တဲ့ OS က သိပ်မဆန်းရင်တောင်မှ တစ်ဆင့်တက်တက်သွားမယ်ဆိုတော့ သုံးရတာပိုကောင်းလာမှာ အမှန်ပါပဲဗျာ။
Ref: Apple Press
Posted by Wai Phyo at11:44 AM0comments
ဒီတစ်ပတ် မက်ခ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ တိုတိုထွာထွာလေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
- Leopard Golden Master Build က Developers တွေကို မပေးတော့ပါဘူးတဲ့။
- အိုင်ဖုန်းကို ဂျာမနီမှာ T-Mobile နှင့် ပြင်သစ်မှာ Orange ဆိုပြီး အတည်ပြုပြီးပါပြီတဲ့။
- အိုင်ဖုန်း/အိုင်ပေါ့ တပ်ခ်ျ SDK ကို ဖေဖော်ဝါရီမှာ ထုတ်ပါမယ်တဲ့။ အိုင်ဖုန်းမှာ မြန်မာလို ရေးလို့ ရအောင် လုပ်ရမယ်!!!!
- အိုင်ဖုန်း ကြော်ငြာအသစ်တွေလည်း အားရင်သွားကြည့်လိုက်ပါဦး။
- တစ်ချို့ စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေအတွက် Leopard အထူးလျှော့ဈေး ရှိတယ်ပြောပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာတော့ မသေချာပါဘူး။
- Gartner ရဲ့ အဆိုအရ ပန်းသီး မားကတ်ရှယ်က ၈.၁ရာခိုင်နှုန်းတိုးသွားပြီး ကွန်ပျူတာဈေးကွက်မှာ တတိယနေရာကို Dell, HP တို့နောက်ကနေ လိုက်နေပါတယ်။
- 4th Quarter of Fiscal Year Earnings ကို အောက်တိုဘာ ၂၂၊ တင်္နလာနေ့မှာ ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တက်လာမလဲ ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
Cupertino Company ကတော့ တော်တော်အလှုပ်ရှုပ်နေပုံပဲ။ ကျွန်တော်လည်း မနက်အလုပ်ရောက်ရင် အချိန်ရတာနှင့် သတင်းတွေဖတ်ဖြစ်တယ်။ သတင်းဆိုလို့ ဒီစာရေးမိတာဗျာ။ တစ်ခါကကျွန်တော် Blog ဆွေးနွေးပွဲလေး၁ခုသွားတော့ ကျွန်တော့် အသိတွေက ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ သူက မက်ခ်သတင်းတွေရေးတယ်လေတဲ့။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော် သတင်းရေးတာကို ၀ါသနာပါရယ်လို့ဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာပြန်ပြီးရေးနေမယ့်အစား ကျွန်တော်ကလူတိုင်းကို အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လိုက်စေချင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က ဘာသတင်းထောက်မှ မဟုတ်သလို၊ ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်က သတင်းတွေလည်း တခြားမှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲ။ မြန်မာလိုဖြစ်နေတာ၁ခုပဲကွာတာ။ နိုင်ငံခြားဆိုက်က ဟာတွေက အမှန်အကန် အပ်တူဒိတ်တွေ။
ဒါကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောတယ်၊ မက်ခ်သတင်းတော့ လူတွေက အင်္ဂလိပ်လိုသိပ်မဖတ်တော့၊ စိတ်ဝင်စားမှုလည်းနည်းတော့ ဘာသာပြန်ပြီးရေးတာကောင်းပါတယ်တဲ့။ သူပြောတာလည်း မမှားပါဘူး။ တချို့လူတွေ အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ၊ ကျွန်တော်က ဆောင်းပါးတွေ၊ အမြင်တွေရေးရတာကိုပဲ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပညာရေး၊ လူမှုဘ၀နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို ဒီ personal blog မှာ ရေးတာကတော့ သင့်တော်ပါတယ်လို့လည်း ယူဆပါသည်။ အဲ့တော့ မက်ခ်သတင်းရေးတဲ့လူလို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြလျှင် ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ထဲတွင် ကလိကလိဖြစ်ရပါသည်။ အတင်းကာရော မက်ခ်တွေရေးမိတဲ့ အကြောင်းကြောင့်လို့ လက်ညှိုးထိုးရင်လည်း မမှားပါ။
အဲ့တော့ အဓိကပွိုင့်က သတင်းရေးတော့ရေးပါမည်။ စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေရှိရင် ၊ အရမ်းကိုဟော့နေတာတွေ၊ ရှိရင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါကလည်း ကျွန်တော် အခြားသတင်းဆိုက်၁ခုမှာ စမရေးခင် အချိန်အတွင်းသာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နောင်ဆိုရင် ဒီ Personal Blog ကတော့ ကျွန်တော့် Personal တွေ့ရှိမှုတွေ၊ ကြုံတွေ့မှုတွေသာ ပိုများလာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါသည်။
ဆိုတော့ ... ကွန်ပျူတာ အကြောင်းရေးသူလို့သာ ပြောင်းလဲ သမုတ်ကြပေကုန်။ မက်ခ်တင်မက ၊ ဂျားကော၊ ခွက်ပါ လေ့လာလိုက်စားကြောင်းလည်း အငြားသိဇေရန် ထုတ်ဖော်အပ်ပါသည်။
Posted by Wai Phyo at1:28 AM0comments
OS X Leopard Release Date = 26th Nov | Apple Starts Countdown
ကျွန်တော်က Golden Master ဘယ်နေရာမှာလဲ လိုက်ရှာတုံးရှိသေးတယ်။ Apple က Leopard ( OS x 10.5 ) ထွက်မဲ့ရက်ကို ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မနေ့က ညနေ အစောကြီး၊ ( အမေရိကန်မှာဆို မနက်စောစောပေါ့ ) ကတည်းက Down နေတဲ့ Apple Website ကို လူတွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ အာကာသပုံ နောက်ခံကြီးမှာ ဒစ်ဂျစ်တွေနှင့် Countdown Counter ကြီး ဟဲဗီးကြီးပေါ်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Macworld က ခပ်ညံ့ညံ့ပြီးသွားခဲ့ပေမယ့် အခု အသစ်ပါလာမယ့် Features 300 + ကို တွေ့ရတော့ ချက်ခြင်းပြောင်းသုံးဖို့ စိတ်သန်လာပါတယ်။ တချို့ Features တွေကို ၀င်းဒိုးသမားတွေက ဝေဖန်ကောင်းဝေဖန်မှာပါ။ အဲ့ဒါတွေရှိပြီးသားလို့။ ဟုတ်ပါတယ်၊ တချို့ဟာတွေက Firefox မှာ နှစ်ချီပြီးရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Time Machine, Sandboxing, System Wide Digital Signing, Core Animation တွေကအစ မျက်မမြင်တွေကို ကောင်းကောင်း အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ Braille System တွေကတော့ ထူးရှယ်တွေဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ Application Memory Space ကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်တဲ့ အရာတွေဟာ ဟက်ကာတွေကို ကောင်းကောင်းတားနိုင်ပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကတော့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ တဖြည်းပြီးတဖြည်းပိုကောင်းလာတဲ့ ဒီ OS ဟာ Revolution မဟုတ်ပေမယ့် လှပတဲ့ Evolution ၁ခုပါ။ 10.4 ကနေ 10.5 ပြောင်းသုံးတဲ့လူတွေအတွက် အရမ်းမတရား ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာဟာ ပိုပြီးသုံးလို့ကောင်းလာမယ် ဆိုတာမလွဲပါဘူး။ စက်အစုတ်အဟောင်းတွကအစ Support လုပ်တဲ့ ဒီဝင်းဒိုးဟာ Mac တော်တော်များများကို Support လုပ်မှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီအချက်ကို မိုက်ခရိုဆော့ဖ် က လေ့လာသင့်ပါတယ်။ 64bit, Multicore, Advanced RAM Handling တွေကို ဗားရှင်း၁ခုထဲရအောင် ထုတ်တာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ အချက်၁ခုပါ။ အလကားပါလို့ သူများတွေကို လိုက်ဖဲ့နေမဲ့အစား စတိဗ် ဘောလ်မား နည်းနည်းပါးပါး ကြည့်ပြီးမှပြောသင့်ပါတယ်။
စင်္ကာပူမှာလည်း နောက်မကျပါဘူး။ ထွက်မဲ့နေ့ကတစ်ရက်တည်းပါ။ ကျွန်တော်တော့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ညှိနေတယ်၊ ဘယ်လိုဝယ်ရင်အတန်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ။ Preorder လုပ်ချင်ရင် Singapore Apple Store မှာ ရနေပါပြီဖြစ်ကြောင်း အတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါဒည်။
Posted by Wai Phyo at1:39 PM0comments
Folks, whatacoincidence! Few days ago, I wroteapost on Al Gore, Apple and my view on Environment. Shockingly, I found out today's international BLOG ACTION DAY on environment.
What could I say? Join them and post something about your beautiful healthy environment.
Posted by Wai Phyo at11:36 PM0comments
Posted by Wai Phyo at1:32 AM0comments
Environmental Affairs ဟာ ဒီနေ့ ၂၁ရာစုရဲ့ ခေတ်အစားဆုံးတော့ပစ်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိုဇုန်းလွှာပေါက်တာ၊ ရေခဲပြင်တွေအရေပျော်တာ၊ မြစ်တွေ အဆိပ်သင့်တာ တွေ က အစ ဟုိုးလေးတကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်က ဟာရီကိန်း၊ အဲ့တာတွေ အားလုံးဟာ ပတ်ဝန်းကျင် မသန့်ရှင်းလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံတွေကထွက်တဲ့ မီးခုိုးငွေ့တွေ ဟာ အင်မတန် ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မိုးနှင့်အတူပြန်ရွာလိုက်ရင် အက်ဆစ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ။ ဘယ်လိုမှ ပြေးမလွတ်တဲ့ အရတဲ့ ကပ်တွေထဲမှာ သူလည်းပါပါတယ်။
စင်္ကာပူလို သပ်ရပ်မှုကို ထိပ်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်မှာတောင် ဘယ်တော့မှ ပေါ့ဆတယ် မရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့ကားတွေ မီးခိုးဘယ်လောက်ထွက်နေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ ဈေး၊မားကတ်တွေ ပလတ်စတစ်ဘယ်လောက်သုံးနေလဲဆိုတာ အစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင် အခုဆို Reusable အိတ် အစိမ်းကလေးတွေ သုံးတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရလာပါပြီ။ အလကားနေအလကားအဲ့အတိုင်းတည်ရှိနေပြီး ပြန် Recycle မလုပ်ရင် ဘယ်တော့မှ မပျက်တဲ့ အဲ့ဒီ ပလတ်စတစ်အိပ်တွေဟာ အမှိုက်တောင်ကုန်းကြီးတွေလောက်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ Idiocracy ရုပ်ရှင်ကြည့်တုံးက မှတ်သားရပါတယ်။
Apple ဟာ အရင်တုံးက သူ့ရဲ့ ကွန်ပျူတာဖြူဖြူလေးတွေ ဟာ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာကို လစ်လျူရှုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ CSR လို့ခေါ်တဲ့ Corporate Social Responsibility ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိန်းမှုကို လူတွေက အလေးထားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ စတီးဂျော့ဗ်လည်း ခေါင်းမမာနိုင်တော့ပါဘူး။ အခုအသစ်ထွက်တဲ့ သူ့ရဲ့အိုင်တီပစ္စည်းအသစ်တွေမှာ မဂ္ဂနီဆီယမ် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပါတယ်။ အလူမီနီယမ်ကို ပိုပြီးသုံးလာတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ (ကျွန်တော် ပါဝင်မှုပမာဏတွေကိုတော့ တိတိကျကျမသိပါခင်ဗျား) နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်တဲ့ ဇယားတွေ ချတ်တွေမှာလည်း အိုင်တီကုမ္ဗဏီတွေကြားထဲမှာ သူကထိပ်ပိုင်းကို ပြန်တက်လာပါတယ်။ ဗဟုသုတအရပြောရရင် Starbucks ကလည်း အတော်မြင့်တဲ့ rank မှာရှိပါတယ်။
အဲ့တော့ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတဲ့ သတင်းက Albert Gore. Jr. ( အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟောင်း အဲလ်ဂိုး ) ရဲ့ နိုဘယ်ဆုရတဲ့ သတင်းပါ။ သူဟာ Inconvenient Truth လို့ခေါ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်နှင့် အော်စကာဆုရခဲ့သူပါ။ (ကျွန်တော့် Sidebar မှာ ထည့်ထားပါတယ်။ Badge လေး နှိပ်ကြည့်ကြပါ။ ) သူက သူ့ရဲ့ ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်း ဆုငွေကို တစ်ဝက်လှူပစ်မယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသတင်းဟာ Apple ကို ပိုပြီးဂုဏ်တက်စေပါတယ်။ အဲလ်ဂိုးဟာ ပန်းသီးကုမ္ဗဏီရဲ့ Board of Directors ထဲက တစ်ယောက်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ Apple Website ကိုသွားကြည့်ရင် သူ့ကို ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ စာမျက်နှာကို တွေ့ရမှာပါ။ အင်း .... နောက်ဆို iTunes ကြော်ငြာတွေ Environment Oriented တောင်ဖြစ်လာမလားမသိဘူး .. ဟီး..။
Al has put his heart and soul, and much of his life during the past several years, into altering and educating us all on the climate crisis. We are bursting with pride for Al and this historic recognition of his global contributions.
သြော်နောက်ဆုံး သတင်းလေး၁ခု၊ မိုက်ခရိုစုပ်ဖ် ရဲ့ Imagine Cup ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ လူများ ဒီနှစ်ရဲ့ Theme ကလည်း Environment ပါပဲခင်ဗျာ။ မနှစ်က တော့ Education ပါ။ .. အိမ်မှာ အိမ်သုံး ပလတ်စတစ် Recycle လုပ်တဲ့ စက်တို့ဘာတို့ထွင်ပြီး ၀င်ပြိုင်ပေါ့ဗျာ။ ဆိုတော့ ၂၀၀၈ မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စတွေ ပိုဟော့လာဦးမယ် လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ (အင်း..တကယ်တော့ တစ်သက်လုံးဟော့နေမှာပါ။ )
Posted by Wai Phyo at1:36 PM0comments
နောက်ထပ် လူငယ်တွေနှင့် ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်၁ခုဆိုပါစို့။ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ အခုဈေးကွက်မှာရှိနေတဲ့ အိုင်တီပစ္စည်းတွေရဲ့ ရောင်းအားကို ကောင်းကောင်းမောင်းနှင်နိုင်တာကို ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘာတွေက အထောက်အကူလုပ်သလဲဆိုတာကို ကြည့်ကြရအောင်။ ကိုစေတန်၁ခါ မေးဖူးတဲ့အကြောင်းအရာပါ။ ၀ဗ်၂.၀ လို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီ ၀ဗ်၂.၀ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲမေးရင် တိတိကျကျ မသိပါဘူး။ Tim O'Reilly က သူ့ရဲ့  ၀ဗ်၂.၀ definition ကိုယ်၌မှာတောင် အဲ့ဒါဟာ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့  စကားလုံးလှလှတွေထဲက ၁ခုပါတဲ့။ လူတွေက ဒါပဲထပ်ခါထပ်ခါသုံးနေတော့ မျက်စိနောက်စရာ ဖြစ်လာတာပေါ့။ ဒီကြားထဲ ဂူဂယ် စီအီးအိုကြီးက ၀ဗ်၃.၀ လာတော့မယ်ဆိုတော့ ရုတ်ရုတ်သဲသဲတွေ ထပ်ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပို့စ်ရေးဖို့ကလည်း နည်းနည်းပါးပါး အဲ့ဒီကောင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဖို့ကလည်း လိုတာမို့ ကျွန်တော် နားလည်ထား သိထားသလောက် ပြောပါရစေ။
အဲ့ဒီ ၀ဗ် ၂ ပွိုင့် အိုး ( ကျွန်တော်က အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် ) ကို ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် သူဟာ ဆားဗစ်စ်၁ခုလည်းဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေ၊ နက်ဝက်ခ်တွေ၊ လူလူခြင်းချိတ်ဆက်မှုတွေကို အရမ်းအခြေခံပါတယ်။ သူ့ရဲ့  ဆားဗစ်က လူတွေရဲ့  ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ driving force ပေါ့လေ၊ အဲ့ဒါကို ပိုပြီး အားပြုပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းတဲ့ ဆားဗစ်စ်၊ ကြီးသထက်ကြီးတဲ့ ဆားဗစ်စ် ၁ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်တာပါ။ Communication က အသက် ဆိုပါစို့။ စစခြင်း သေးနေလည်း ကိစ္စမရှိဘူး၊ သူတို့က အချိန်နှင့် အမျှ၊ ပါဝင်တဲ့လူတွေများလာတာနှင့် အမျှ ပိုကောင်းလာတဲ့ ဆားဗစ်စ်၁မျိုးပါ။ Social Patterns တွေပေါ့ဗျာ။ အဲ့လိုပိုကောင်းလာအောင် အဲ့ဒီ ၀ဗ်၂.၀ စနစ်၁ခုက အဲ့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ ယူဆာတွေ၊ လူတွေ ဆီကနေ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းမှန်မှန်ရယူနိုင်ရပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေကို သုံးပြီးသူ့ရဲ့ ဆားဗစ်စ် ၀န်ဆောင်မှု ကို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်။ ဒါကို Data/Information Driven လို့ ဆိုကြပါတယ်။ နောက်ပြီး စတင်လုပ်တဲ့လူက အရာအားလုံးလိုက်လုပ်နေစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။ User Accentric ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ချဲ့  ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။
ဒီအချက်ကို Facebook ကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ Frendster ကိုကျော်တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ Facebook က သူ့ရဲ့  API တွေ၊ ယူဆာတွေကို ကြိုက်သလို ပေးကလိပြီး ပိုပြီးကောင်းသထက်ကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၁ခုကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို ဖန်တီးခွင့်ပေးလိုက်တာပါ။ Community Driven လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ နောက် Personalization လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ကောင်ကဘာလည်းဆိုတော့ ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုတဲ့လူတွေ ကိုယ်နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး အသုံးပြုစေပါတယ်။ Google ကလည်း အတော်ကောင်းတဲ့ ဥပမာ၁ခုလို့မြင်ပါတယ်။
အဲတော့ လူငယ်တွေနှင့် ဒီ ၀ဗ်၂.၀ အရာတွေ ဘယ်လိုပတ်သက်လဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။ ဘလော့ခ်တွေ၊ social networking sites တွေဟာ ၀ဗ် ၂ ဒဿမ အိုး ရဲ့  ကနဦး ဆရာကြီးတွေထဲမှာပါပါတယ်။ လူငယ်တွေ၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ လူမှုရေး၊ communications တွေကို သိပ်အလေးထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့  Peers တွေ ဘာလုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုနေလဲ က အစ နောက်ဆုံး အချက်အလက်ဖြန့်ချီရေးတွေ ကိုပါ သူတို့က သူတို့နှင့် ပုံစံတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရွယ်တူတွေကို အားကိုးကြပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့  အပေါင်းအသင်းဝင်ဆံ့မှုအပေါ် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် အထက်တန်းကျောင်းဟာ သူတို့အတွက် အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ ၊ လူမှုဘ၀တွေ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်တဲ့နေရာ၁ခုပါ။ သူငယ်ချင်းဘယ်လောက်ပေါသလဲဆိုတဲ့ ပေတံနှင့် အချင်းချင်းလိုက်တိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ MySpace လို အရာတွေဝင်လာပါတယ်။ အပြင်မှာ ဘော်ဒါတွေထားသလို၊ online မှာလည်း ၁ဦးနှင့်၁ဦး အချိတ်အဆက်လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို လူကြီးတွေက သိပ်ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာ ဒီသူငယ်ချင်းတွေနှင့်အချိန်ကုန်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Friendster, FaceBook, MySpace စတာတွေ နာမည်ကြီးလာပါတယ်။ ကွန်ယက်တွေကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
နောက် ၀ါသနာဆိုတဲ့ အရာဟာလည်း သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ အဖေက ဆရာဝန်၊ သားကတော့ ပန့်ခ်အဆိုတော် ၁ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနှစ်ယောက် စကားတော်တော်ထိုင်ပြောလို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ သူတို့ဝါသနာတူခြင်းလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာစုမိကြပါတယ်။ ၀ဗ်၂.၀ရဲ့  ထုံးစံအရ အသုံးပြုသူတွေရဲ့  ဒေတာ တွေကို အခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အချင်းချင်းဖလှယ်စရာရှိဖလှယ်လို့လည်းရတဲ့ အဲ့ဒီနေရာတွေဟာ သူတို့အတွက် တော်တော်ကောင်းတဲ့ဌာနေတွေလို့ သမုတ်ကြပါတယ်။ နောက် ဘလော့ခ်တွေဆိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပါပဲ၊ ကိုယ် သိတဲ့အရာ၁ခု၊ မသိတဲ့အရာ၁ခု၊ ထင်မြင်ချက်လေး၁ခု၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ဖော်ပြောကြွားချင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေ နားမထောင်ရင် နေပါစေ၊ ငါဒီနေ့ဘာလုပ်လဲ တလောကလုံးသိအောင် ဆိုပြီး MySpace တို့ Blogger တို့မှာ စာတက်ရေးပါကြပါတယ်။
သို့သော်ငြားလည်း ဘယ်နည်းပညာသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အန္တရာယ်လည်းပါလာစမြဲပါ။ Cyber Predators လို့ခေါ်တဲ့ စားမယ်ဖြဲမယ် တကဲကဲကောင်တွေကြောင့်လည်း တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ နောက်လူငယ်တွေဟာ စွဲလန်းလွန်တဲ့နေရာမှာလည်း အားသန်ပါတယ်။ အလကား အားအားရှိထိုင်ပြီး Facebook သွားလိုက်၊ Friendster သွားလိုက်၊ ဓါတ်ပုံလေးတင်လိုက်၊ ဂိမ်းလေးတွေရှယ်လိုက်နှင့် အချိန်ကို အလဟဿဖြုန်းပစ်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းများလာပါတယ်။ ဒါကတော့ လုံးဝမကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ နောက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာ တင်ဖို့ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီချင်း စတာတွေကို လိုက်လံစုဆောင်းကြတာလည်း တရားမ၀င်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို အသုံးများလာကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဥပဒေနှင့်ငြိစွမ်းပြီး တော်တော်ဒုက္ခရောက်မဲ့ကိန်းတွေပါပဲ။ ဘလော့ခ်မှာ သူများဓါတ်ပုံယူတင်တာတောင် ထောင်နှစ်ချီပြီးကြနိုင်ပါတယ်။ IP Laws တွေဆိုတာကို မေ့လျော့လာခြင်းတွေပေါ့ဗျာ။
အဲ့တော့ MySpace လို အရာတွေကို ပိတ်ပစ်ရတော့မှာလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာကို ပိတ်ပင်ခြင်းဟာ သူတို့ကို နည်းပညာကို လုံလုံခြုံခြုံ သုံးနည်းသင်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုဆိုက်တွေကိုသာ ၀င်ကြည့်ရမယ်လို့ နီတိအရရော၊ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းအရရော သင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်က ကျောင်းတွေမှာ အဲ့လို Facebook လိုဆိုက်တွေကို ပိတ်ဖို့စဉ်းစားတာဟာ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေ၊ ကွန်ပျူတာမရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းပြင်ပ၊ အိမ်မှာဆိုရင် peers တွေနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံလိုက်ရ သလိုပါပဲ။ နောက်ပြီး အဲ့လို social sites တွေကို ပိတ်ပစ်ခြင်းအားဖြင့် Safe Sex တွေ၊ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလည်း အကုန်မမှန်ပါဘူး။ R.E ကို ကျောင်းမှာသာကောင်းကောင်းသင်ပေးဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ နောက် လူငယ်တွေရဲ့  အတွေးအခေါ်ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ကျောင်းတွေက Blog တွေကို Ban ခြင်းအားဖြင့် ပိတ်တယ်ဆိုတာ တော်တော်လွန်ပါတယ်လို့ နည်းပညာ လေ့လာသူတွေက ပြောကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့် ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလို ၀ဗ်၂.၀၊ ဆိုရှယ်ဆိုက်တွေ ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို Skills တွေ တော်တော်များများလည်း သင်ပေးပါသေးတယ်။ Photos, Videos Editing တွေ၊ Music Creationg တွေ၊ Web Layout တွေက အစ Widgets/Apps Developing တွေ၊ အင်တာနက်ကိုသုံးပြီး အချက်အလက်တွေကို နေ့စဉ်ဘ၀အတွက် မြန်မြန်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာတွေကိုပါ သင်ပေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ နောက်ပြီး ဘာပစ္စည်းသစ်ပဲထွက်ထွက် ၁ယောက်နှင့် ၁ယောက် လက်တို့ပြီး ၀ယ်ယူအားပေးနိုင်တဲ့ Marketplace ကြီးမို့လို့ စီးပွားရေးသမားတွေကလည်း မျက်စိကျကြပါတယ်။ ကောင်းကောင်းသုံး၊ ကျူးကျူးလွန်လွန်တွေ မဖြစ်ရင်၊ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားနှင့်အညီ ဆေးဝါးဖြစ်မဲ့ နေရာလေးတွေပါလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ၀ဗ် ၃ ပွိုင့် အိုး ဆိုတာကိုလည်း စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
Posted by Wai Phyo at3:23 PM0comments